Indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram Sheet Sheet
I-Instagram yenye yezona ndlela zokucwangcisa kunye nezisebenziseka lula ukuthengisa kunye nokukhuthaza amashishini, iimveliso kunye neemveliso. Imoto, ngokungafaniyo nezinye iisayithi zemidiya yoluntu, I-Instagram ayifuni ukuba uhlawulele iintengiso okanye abalandeli ukuze ukwandise ukuzibandakanya kwakho.
Nangona kunjalo, Ukuthengisa kunye nokufumana abalandeli ukuze ube nezinga lokuzibandakanya elikhethekileyo kwi-Instagram kunzima kwaye kunzima, kodwa inokwenziwa lula ngoncedo lwephepha lokukopela.
Iphepha lokukopela? Ivakala inika umdla, hayi? Emva koko, uyawazi amaphepha okukopela e-Instagram? Ewe akunjalo, ke siya kukuchazela yonke into kweli nqaku. Iphepha lokukopela le-Instagram luluhlu lwee-hacks, izixhobo kunye nemiyalelo ekufuneka uyilandele ukuze ufumane abalandeli abaninzi.
Ngaphandle koko, iphepha lokukopela liya kukunceda ukwandisa ukudibana kwakho ngokufumana izixhobo eziyimfuneko zokwenza imisebenzi efunekayo. Ke ufuna ukwazi ukuba ungafumana njani abalandeli abaninzi kwi-Instagram cheat? kakuhle, yile nto siza kuyithetha apha, ke hlala ubukele.
Indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram Ukukopela
Abantu, Iinkampani okanye iimveliso zisebenzisa iindlela ezininzi kunye nezicwangciso zokwandisa abalandeli babo be-Instagram, où certains d’entre eux gagnent environ 11 000+ followers Instagram pour 0 $ en quelques jours. Eli phepha lokukopela le-Instagram liyafana; ikwayindlela yokwandisa abalandeli bakho.
Nangona kunjalo, bambalwa abantu abakwindawo yokuthengisa abaziyo le phepha le-Instagram cheat. Ngoko, ukuba ungomnye waba bantu bambalwa abangaziyo eli phepha lokukopela le-Instagram, kodwa ufuna ukuphuhlisa iqonga lakho le-Instagram kwaye ufumane abalandeli abaninzi, kakuhle, hlala kwaye uphonononge eli nqaku.
Eli nqaku kuphela kwesikhokelo # 1 sendlela yokufumana abalandeli abaninzi be-Instagram..
Ungabafumana njani abalandeli abaninzi kwi-Instagram
Ngoko, ngokuya kuluhlu lwendlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram cheat, Ungalibali ukulawula abalandeli bakho abakhoyo emva kokufumana abalandeli abaninzi.
Isicwangciso samva nje sokurhuma
Uninzi lwabantu lucinga ukuba “umrhumo-ku- umrhumo ” I-Instagram ayinamsebenzi ; ngoko ke kufuneka uzame isicwangciso sobhaliso samva nje. Kulapho uzakufumana khona nabani na onenani elikhulu labalandeli kwaye uya kulandela phi loo akhawunti., akhawunti ingakumbi edumileyo.
Enye ingcebiso yesicwangciso sokugqibela sobhaliso kukurhuma kwiiakhawunti ukusuka kwimenyu ehlayo. Ungazibona ezi akhawunti emva kokulandela umntu onomdla okanye umthetheleli kwi-Instagram, kakhulu kunokwenzeka, Rhuma kwiiakhawunti eziqinisekisiweyo.
Ngaphandle koko, ukuba usebenzisa le ndlela ngokuphindaphindiweyo, uya kubona ababhalisile bakho besonyuka ecaleni kwakho. Nangona kunjalo, Lumka ungabhalisi kubantu abaninzi kakhulu kwi-Instagram, kuba lo msebenzi ungakhokelela ekuvalweni kweakhawunti yakho. Ngaloo ndlela, ukukunceda, nous vous recommandons de ne suivre que 30 comptes par heure, kuba oku kuya kukuvumela ukuba uhlale unemveliso ngelixa uphepha ukuvalwa.
Sebenzisa ii-hashtag ze-Instagram
Ukusebenzisa ii-hashtag kwi-Instagram yenye yezona zinto zibalulekileyo okanye iihacks ezinokukunceda wongeze abalandeli bakho., kwaye xa kufikwa kwii-hashtag ze-Instagram, khumbula ukuba ukhuphiswano lubalulekile.
Ngaphandle koko, olu qhekeko alukhethi kwiiakhawunti ngenani elincinci labalandeli, ke zama ukwenza i-hack yokuqala kuqala, kwaye ukuba ihamba kakuhle, ungaqhubeka kolu khetho. Le nombre de followers suggéré avant d’utiliser les hashtags se situe entre 5 000 et 10 000.
Enye into ebalulekileyo ye-Instagram yokufumana abalandeli abaninzi isekwe kwigama lakho le-Instagram okanye igama lomsebenzisi. Yile nto egcina abantu babuyela kwiprofayile yakho emva kokungakulandeli kamsinya nje bakubona iphepha lakho le-Instagram.. Ngamaxesha amaninzi, iqonga kunye nobuchule bubodwa abuyi kukunceda uqokelele abalandeli, kuba ngamanye amaxesha isekwe kwigama lakho lomsebenzisi.
Ukuba negama lomsebenzisi elisebenzayo kwi-Instagram ukutsala abalandeli, igama lakho lomsebenzisi akufunekanga libe nalo:
● Iimpawu zokubhala
Masiqhubele phambili ngokulandela iqhinga lokulandela ngokulandelayo le-Instagram.!
Iindlela zexesha elide ze-Instagram zokuKhula kwabaLandeli
Ezi zicwangciso zokuphuhlisa abaphulaphuli bakho azanele ngokwazo ; Kwakhona ufuna isicwangciso sexesha elide ukugcina ababhalisile bakho. Ngaloo ndlela, kule hack, sinikeze iindlela zokufumana kunye nokugcina abalandeli bakho ixesha elide.
● Chaza abaphulaphuli bakho abafanelekileyo.
● Sebenzisa amagama amade.
● Sebenzisa i-emojis.
● Thumela iividiyo ezongezelelweyo.
● Sebenzisa ii-hashtag ngempumelelo.
● Qhubeka ukwabelana Amabali e-Instagram.
● Nxibelelana nabalandeli bakho.
Article précédentUkufumana njani ukuthandwa ngakumbi kwi-Instagram : 15 Conseils et les Meilleures Applications